AKHRISO:- Madaxweynaha Somaliland oo sameyay isku shaandhey Golaha Wasiirada ah – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAKHRISO:- Madaxweynaha Somaliland oo sameyay isku shaandhey Golaha Wasiirada ah
Hiiraan Xog, Madaxweynaha Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa golihiisa wasiirrada ku sameeyay isku shaandheyntii ugu horreysay, wasaaradaha qaarkood ayaa la isku bedalay halka qaar kalena loo magacaabay wasiirro cusub.
Isku shaandheyntan uu maanta samaeeyay madaxweynaha ayaa saameysay qaar ka mid ah golaha wasiiradda iyo agaasimeyaasha wasaaradaha.
Isku shaandheynta uu sameeyay madaxweyne Biixi ayaa u dhignayd sidan:
1- Sacad Cali Shire oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiirka wasaaradda maaliyadda.
2- Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirkii hore ee waxbarashada ayaa loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland.
3- Cabdulqaadir Maxamed Sh. Maxamuud, wasiir ku xigeenkii hore ee waxbarashada iyo Sayniska ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiirka maaliyadda.
4- Maxamed Daahir Axmed, wasiir ku xigeenkii hore ee maaliyadda ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska.
5- Axmed Obokor Maxamed, agaasimihii hore ee wasaaradda maalgashiga iyo horumarka ayaa loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska.
6- Yuusuf Maxamed Cabdi,wasiirkii hore ee maaliyadda ayaa loo magacaabay inuu noqdo xubin ka tirsan golaha sare ee waxbarashada qaranka.
7- Prof. Maxamed Faarax Xareed, agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska ayaa isna loo magacaabay in uu noqdo xubin ka tirsan golaha sare ee waxbarashada qaranka.
Wajiyada ku cusub siyaasadda Somaliland ee maanta la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah:
1- Cismaan Jaamac Aadan, waxaa loo magaacabay in uu noqdo wasiirka cusub ee waxabarashada iyo Sayniska.
2- Deeqa Cabdi Yuusuf, ayaa loo magacaabay in ay noqoto agaasimaha wasaaradda maaliyadda.
3-Faadumo Cabdillaahi Diiriye ayaa loo magacaabay guddoomiye ku xigeenka hey’adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland.